Mukadzi ane makore 101 mukadzi weItaly akapona Spanish Flu, WWII, uye COVID-19 ... katatu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mukadzi ane makore gumi nemana wekuItaly akapona Spanish Flu, WWII, uye COVID-101… katatu
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mukadzi ane makore gumi nemana wekuItaly akapona Spanish Flu, WWII, uye COVID-101… katatu
Ambuya vane makore zana nemakumi masere nematanhatu vekuItaly, avo vakararama kuburikidza neSpanish Flu neWWII, vakaedza hutachiona hwecoronavirus uye vakapona katatu mugore rimwe chete.
Vanachiremba vechiItaly navanamukoti vanoshamiswa nekusimba kwaMaria Orsingher ane makore 101 uyo akatanga kuongororwa aine hutachiona Covid-19 kumashure mumazuva ekutanga echirwere muna Kukadzi.
“Muna Kukadzi, amai vakaiswa muchipatara kuSondalo uyezve chiremba wechipatara chiri kwaSondalo, uko kwavakarapwa, vakatiudza kuti vaive vasati vamboita munhu akura akadaro achibuda mukonona nenzira iyi, aifema ega uye kwete aive nefivha, ”anodaro mwanasikana Carla.
Mushure mekupora, wezana ramakore akabva apemberera zuva rake rekuzvarwa rechi101 muna Chikunguru.
Nehurombo, akazoiswa muchipatara nefivhiri munaGunyana, panguva iyi akayedza akagwara nechirwere kechipiri uye akarapwa kwemazuva gumi nemasere. Vashandi vekurapa vakashamisika nekusimba kwake uye vakaudza vezvenhau vemunharaunda kuti kurapwa muchipatara kwaive kungwarira.
Maiwe, iyo coronavirus yakauya kwaari imwezve imwe nguva, sezvo akayedza akaonekwa zvakare neChishanu chapfuura. Kechitatu kechitatu zvinoita sekunge runako, hazvo, sezvo Orsingher parizvino asymptomatic.
Orsingher anoramba akarara uye achinetseka kutaura nevanasikana vake vatatu sezvo ari matsi, asi mhuri iri kumirira nemoyo wese kusangana kwavo kunotevera nemukadzi wesimbi uyu.
Akazvarwa musi waChikunguru 21, 1919 mumusha mudiki weGaggio muArdenno, Orsingher akararama kuburikidza neSpanish Flu denda, akange akaroora panguva yeHondo Yenyika II uye parizvino akatsungirira katatu kweCovid-19.
"Kunyangwe vanachiremba vanoshamiswa," vanodaro vanasikana vake, vachisimbisa kuti amai vavo vakavhenekwa katatu uye vakaonekwa vasina katatu, zvese mumwedzi mipfumbamwe.
"Pakave nezvikamu zvakati wandei zveongororo dzakaipa muvarwere vakapora, zvakateverwa nehukama hutsva hwakagara kwenguva refu kwechimwe chezvikonzero zvataurwa pamusoro apa," anodaro Carlo Signorelli, purofesa wehutsanana paSan Raffaele University kuMilan.